Ngokusekwe kwimfuno, le yeyona mibala ithandwayo kwi-5g yeapile iphone 12 pro max
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngokusekwe kwimfuno, le yeyona mibala ithandwayo ye5G Apple Apple 12 Pro Max
Ngokusekwe kwimfuno, le yeyona mibala ithandwayo ye5G Apple Apple 12 Pro Max
Uku-odola kwangaphambili kwe- i-Apple iPhone 12 mini kunye ne-iPhone 12 Pro Max iqale ngolwesiHlanu ngeefowuni zombini ezicwangciselwe ukufika ezivenkileni kumakhaya abathengi nakwiivenkile nge-13 kaNovemba. Ukutyelela iApple & apos; iwebhusayithi , sinokujonga olunye ulwazi oluthunyelwe ngumenzi ukufikelela kwizigqibo ezithile. Ngaphambi kokuba sifike kwezi, unokujonga imihla eqikelelweyo yokuhanjiswa kweenguqu ezingavulwanga ze-iPhone 12 mini kunye ne-iPhone 12 Pro Max engezantsi:
I-Apple iPhone 12 Pro Max
128GB-Novemba 25-Disemba 1
128GB-Disemba 1-Disemba 8
256GB-Novemba 25th-Disemba 1
256GB-Disemba 1-Disemba 8
I-512GB-Novemba nge-25th-kaDisemba 1
I-512GB-ngoNovemba 23-Novemba 25th
I-Apple iPhone 12 encinci
I-256GB-Novemba nge-27th-kaDisemba 2nd
Ke yintoni esiyifundileyo kule datha? Iinguqulelo zeGolide kunye nePacific Blue ze-iPhone 12 Pro Max zezona modeli zaziwayo nangona kukho imfuno encinci yeeyunithi ezibambe i-512GB yokugcina kuyo nayiphi na loo mibala mibini. Akukho namnye kwiinguqulelo ze-Pro zosapho lwe-12 oluyalelwe namhlanje oluya kufika ngomhla wokukhutshwa kwe-13 kaNovemba. Ngokuphathelele i-iPhone 12 mini, zonke iinguqulelo zeemodeli ezingama-64GB kunye ne-128GB zisaza kufika ngomhla wokukhutshwa kwe-13 kaNovemba ukuba iyalelwe namhlanje. Ngokuthunyelwa kweemodeli ezingama-256GB eMhlophe nakuMnyama kulibazisekile ukuya kuthi ga ngoDisemba 2, loo mibala mibini yeyona ithandwayo kukwahluka kwe-5.4-intshi yefowuni.
Inguqulelo ye-128GB ye-iPhone 12 Pro Max inexabiso le- $ 1,099 okanye i-24 yenyanga yokuhlawula i- $ 45.79. Lo ngunyaka wokuqala ukuba apile inoqwalaselo olusisiseko lwelayini ye-iPhone eqala kwi-128GB. I-256GB ye-iPhone 12 Pro Max iya kukuqhubela i- $ 1,199 okanye i- $ 49.95 ngenyanga ngaphezulu kweenyanga ezingama-24. Kwaye inguqulelo ye-512GB yesiphatho ixabisa i- $ 1,399 okanye i-24 yenyanga yokuhlawula i- $ 58.29.
I-Apple iPhone 12 mini ibonelelwa nge-64GB, 128GB kunye ne-256GB yokugcina ngokulandelelana. Inguqulelo ye-64GB iphawulwe kwi- $ 729 okanye kwi-30.37 yeedola ngenyanga ngaphezulu kweenyanga ezingama-24. Iimodeli ze-128GB zithengiswa nge- $ 779 okanye unokwenza iintlawulo ezingama-24 zenyanga ezingama-32.45. I-879 yeedola iya kukurhuqa i-256GB ye-iPhone 12 mini, okanye ungakhetha ukuhlawula i-36.62 yeedola ngenyanga ngaphezulu kweenyanga ezingama-24.
Ukutyabeka kwe-oleophobic kuyaphela
Imicimbi yeT-Mobile emnyama ngoLwesihlanu we2019
IGoogle Nexus 6P vs Samsung Galaxy Note5 vs Apple iPhone 6s Plus: ukuthelekiswa kwe-specs
Final Fantasy XV Pocket Edition esungulwe kwi-Android kunye ne-iOS
Idabi leekhamera zokujonga ubushushu: I-FLIR ONE vs Funa i-Compact Thermal Compact
IWalmart ithatha iAmazon, iRoku, kunye neApple ngezixhobo zayo zokusasaza ngaphakathi ngaphakathi